မျောက်ကျောက်ရောဂါကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ - Hello Sayarwon
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 25/05/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါ ဆိုတာက ကျောက်ကြီးရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ မျိုးရင်းတူတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် တစ်မျိုးကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ 1958 ခုနှစ်က သုတေသန လုပ်ဖို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ မျောက်တွေမှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့် မျောက်ကျောက်လို့ အမည်ပေးခဲ့တာပါ။
ဒီ မျောက်ကျောက်ရောဂါက 1970 ခုနှစ်မှာ လူတွေဆီကို စတင်ကူးစက်ခဲ့ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်ဆီကနေ လူတွေဆီကို စတင်ကူးစက်မှုက အာဖရိကဒေသတွင်း နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အခုလက်ရှိမှာတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၂ နိုင်ငံမှာ မျောက်ကျောက်ရောဂါ ကူးစက်မှုတွေ ရှိနေပါပြီ။
ဒီလို ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မျောက်ကျောက်ရောဂါက ဘယ်လို ကူးစက်တာလဲ။ ကူးစက်မခံရအောင် ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာလေးကို ဗဟုသုတရအောင် ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါဘယ်လို ကူးစက်နိုင်သလဲ ………….
မျောက်ကျောက်ရောဂါကလည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါတစ်မျိုးပါ။ လူအချင်းချင်း ကူးစက်နိုင်သလို တိရစ္ဆာန်ဆီကနေလည်း လူဆီကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရတဲ့ တိရစ္ဆာန်၊ လူတွေနဲ့ ထိတွေ့တာ
ရောဂါပိုး ပေကျံနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ၊ မျက်နှာပြင်တွေကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့မိတာ
အရေပြား ပေါက်ပြဲတဲ့နေရာတွေကနေတဆင့် သွေး၊ ခန္ဓာကိုယ်က ထွက်တဲ့ အရည်တွေ ဝင်ရောက်ပြီး ကူးစက်တာ
ရောဂါပိုးရှိသူ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးလိုက်တဲ့ အမှုန်တွေ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်း၊ နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်၊ မျက်လုံးတွေကနေ ဝင်ရောက်တာကြောင့် ကူးစက်တာ
ရောဂါပိုးရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန် ကိုက်ခံရတာ
အနာထဲကို ရောဂါပိုးရှိတဲ့ သွေး၊ ခန္ဓာကိုယ်က အရည်တစ်မျိုးမျိုး ဝင်ရောက်တာ
ရောဂါပိုးရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန် ကုတ်ခံရတာ
ရောဂါပိုး ရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန် အသားကို စားမိတာ
ရောဂါပိုး ရှိတဲ့ တိရစ္ဆာန်ကို နမ်းရှုံ့တာ
အရည်ကြည်ဖုက အရည်တွေ ပြည်တွေ ထိတွေ့ထားတဲ့ အရာတွေကို ကိုင်တွယ် ထိတွေ့မိတာ
ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ အချိန် အတော်ကြာ နီးနီးကပ်ကပ် ထိတွေ့မိတာ
ရောဂါပိုး ရှိသူရဲ့ အသုံးအဆောင်၊ အိပ်ရာခင်း စတာတွေကို အသုံးပြုမိတာ
ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရသူနဲ့ အတူနေမိတာတွေကြောင့် ကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။
မျောက်ကျောက်ရောဂါကို ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ …….
မျောက်ကျောက်ရောဂါကို အခုလို ကာကွယ်လို့ ရပါတယ်။
တစ်ခုခုကို ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ပြီးတိုင်း လက်ကို ရေနဲ့ ဆပ်ပြာ သုံးပြီး သေချာသန့်စင်ဆေးကြောပါ။ ရေအလွယ်တကူ မရနိုင်ဘူးဆိုရင် ရေမလို လက်သန့်ဆေးရည်နဲ့ သေချာဆေးကြောပါ။
မျက်နှာကို လက်နဲ့ မကိုင်ပါနဲ့
ပါးစပ်၊ နှာခေါင်း၊ မျက်လုံး၊ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းတွေကနေတဆင့်လည်း မျောက်ကျောက်ရောဂါ ဗိုင်းရပ်စ်က ဝင်ရောက် ကူးစက်နိုင်တာကြောင့် မျက်နှာကို လက်နဲ့ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်သလိုပဲ ပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစည်းကို အပြင်သွားတိုင်း ဝတ်ဆင်ပါ။
မျောက်ကျောက်ကလည်း လူတစ်ဦးဆီကနေ တစ်ဦးဆီကို ကူးစက်နိုင်တာကြောင့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခပ်ခွာခွာနေတာကလည်း နည်းလမ်းကောင်း တစ်ရပ်ပါ။ အထူးသဖြင့် ရောဂါပိုးရှိတဲ့သူနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ကိုင်တွယ်ထိတွေ့တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ အနာက ထွက်တဲ့ အရည်တွေ၊ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့ အမှုန်တွေ၊ အနာဖက်တွေနဲ့ ထိတွေ့တာကလည်း ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ရောဂါပိုးရှိသူရဲ့ အသုံးအဆောင်တွေကို အသုံးပြုတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့
ရောဂါပိုး ရှိသူ အသုံးပြုထားတဲ့ အဝတ်အစားတွေ၊ အိပ်ရာခင်းတွေကို ကိုင်တွယ်တာ၊ အသုံးပြုတာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလို လုပ်တာက မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရနိုင်တာကြောင့်ပါ။
နေ့စဉ် ကိုက်တွယ်ထိတွေ့နေတဲ့ အရာတွေကို ပုံမှန်လေး ပိုးသတ် သန့်စင်ပေးပါ။ အများသုံး ဘတ်စ်ကား လက်ကိုင်၊ တံခါးလက်ကိုင်တွေကို ကိုင်တွယ်ပြီးတိုင်းမှာ လက်ကို သေချာလေး သန့်စင်ပိုးသတ်ပါ။
စားပွဲ၊ ထိုင်ခုံလိုမျိုး မျက်နှာပြင်တွေကို အသုံးမပြုခင်မှာ အရက်ပြန်သုံးပြီး ပိုးသတ်ပေးပါ။
ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကို လျှော့ချဖို့ဆိုရင်တော့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို သေချာလေး ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါမယ်။ အပြင်က ပြန်လာတိုင်း ခြေလက်တွေ ဆေးကြောတာ၊ ရေချိုးတာတွေ လုပ်ပေးလို့ ရသလို အဝတ်လဲတာ၊ ပိုးသတ်တာတွေလည်း လုပ်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ဂရုစိုက်တာက ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကို အထိုက်အလျောက် လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံအား ကောင်းတာက ရောဂါတော်တော်များများကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခံအား ကောင်းနေစေဖို့ အိပ်ရေးဝဝအိပ်ပါ။ တစ်ညကို အိပ်ချိန် ၆ နာရီကနေ ၈နာရီ လောက်ရှိအောင် အိပ်ပေးပါ။
ရောဂါတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကုသနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ မပေါ်ခင်မှာ ရောဂါ မကူးစက်စေဖို့ဆိုရင် ကိုယ်ခံအား ကောင်းနေဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ခံအား ကောင်းဖို့ဆိုတာကလည်း အာဟာရပြည့်ဝဖို့ လိုပါမယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ခံအား ကောင်းစေဖို့အတွက် အာဟာရပြည့်ဝမျှတအောင် စားပေးဖို့ လိုပါမယ်။ နေ့စဉ် စားသုံးမှုမှာ ကိုယ်ခံအားကို ထောက်ပံ့ပေးမယ့် အာဟာရတွေ ပါဝင်အောင် စားသုံးပါ။
တိရစ္ဆာန်တွေကို အကာအကွယ်မပါဘဲ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့
တိရစ္ဆာန်တွေကို အကာအကွယ်မပါဘဲ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ ( အထူးသဖြင့် ဖျားတာနေတာ၊ သေဆုံးနေတဲ့ သတ္တဝါတွေကိုပါ)။ ဒီလို ထိတွေ့တာ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရနိုင်တာကြောင့်ပါ။ မဖြစ်မနေ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ လက်အိတ်ဝတ်တာ၊ အကာအကွယ် ဝတ်စုံ ဝတ်တာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
မျောက်ကျောက်ရောဂါကို အခုလို ကာကွယ်ပါ။
တိရစ္ဆာန်တွေကို အကာအကွယ်မပါဘဲ ကိုင်တွယ်ထိတွေ့တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
Monkeypox https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox Accessed Date 24 May 2022
Monkeypox https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/transmission.html#:~:text=Transmission%20of%20monkeypox%20virus%20occurs,%2C%20nose%2C%20or%20mouth). Accessed Date 24 May 2022
Monkeypox https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/prevention.html Accessed Date 24 May 2022
Monkeypox Fact Sheet https://www.vdh.virginia.gov/epidemiology/epidemiology-fact-sheets/monkeypox/?pdf=5736 Accessed Date 24 May 2022
Multi-country monkeypox outbreak in non-endemic countries https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON385 Accessed Date 24 May 2022